(Solar) Awoodda Dadka - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka Wadaagga ah
Bogga ugu weyn/updates/(Cadceed) Awooda Dadka
Bishii Meey 23, 2018, 3 maalmood kadib sannad-guuradii 8-bil ee duufaanta Hurricane Maria ee ku dhacday Puerto Rico, Gargaarka Musiibada ee Isku-Duwaha #PRRebuilds Joogtaynta iyo Caabi Ahaanshaha Deegaanka koox ayaa markii saddexaad timid Barrio Mariana, oo ah beel yar oo buur ku taal oo ku nasata Humacao korkeeda, oo ay ku badan tahay rootfruit (pana) iyo moonshine (cañita) dalka. Ujeedada safarkan ayaa ahaa sidii loo hirgalin lahaa beeshii ugu horaysay ee deegaankaas yeelatay kana shaqeysay micro-grid.
Microgrid-kani wuxuu siin doonaa awood lagu kalsoonaan karo el Centro de Imaginación (Xarunta Imagination Center) oo hadda leh meel lagu nadiifiyo qorraxda, waxay siisaa goobo ay ku shiraan shirarka bulshada iyo aqoon isweydaarsiga, oo ay ku jiraan maktabad, maktabad qalab, iyo xafiisyo loogu talagalay shaqaalaha bulshada ee ardayda ee imminka ah horumarinta iyo bixinta Xalka dadka waayeelka ah ee bulshada. Qolalka waa la soo nuugay oo waxaa la diyaariyey sariiro loogu talagalay mutadawiciinta, waxaana jira qorsheyaal loogu talagaley hostel. Waxa kale oo jira qorshooyin lagu oggolaanayo abuuritaanka ganacsi yar yar iyo qalab la wadaago, sida fikirka bulsheed ee makhaayadda lagu ciyaaro goynta.
Gargaarka Musiibada ee Musalafnimada ah ayaa lala kaashaday BoxPower, Proyecto de Apoyo Mutuo iyo xarumaha kale ee 'Centros de Apoyo Mutuo' si ay u iibsadaan nidaamkan 'micro-grid system' iyo in la xoojiyo adkeysiga iyo awooda xarumaha gargaarka wadajirka ah iyo bulshada inay is taageeraan marka ay ka jawaabayaan dhacdooyinka duufaanta mustaqbalka. Nidaamka ayaa lagu ridi karaa oo lagu soo celin karaa weelka maraakiibta uu saaran yahay si looga ilaaliyo darbiyada sawir-qaadida inay waxyeello gaarto inta lagu jiro duufaanta. Tani waxay hubineysaa in tamarta dib loogu laaban karo isla markiiba duufaanta kadib. Nidaamka waxaa sidoo kale ku jira koronto-dhaliye ahaan kayd koronto awood u leh sida ceymiska oo lagu daro.
Nidaamka 'micro-grid' ee loo yaqaan 'BoxPower solar photovoltaic micro-grid system' waxaa lagu rakibay meel u dhow, iskuul la dayacay, lala wareegay oo ay dib u soo celiyeen asxaabteena dhaqdhaqaaqa si ay u bixiyaan baahiyaha bulshada iyo tababarka, iyo sidoo kale tabaruceyaasha guryaha ee loo maro Xarunta cusub ee Khiyaaliga ah (el Centro de Imaginación). Iskuulka horay ayaa loo xiray loona banneeyay, dhibbane kale oo kamid ah mid ka mid ah wareegyadii Puerto Rico ee xirnaanshaha iskuullada tiro badan - haddana weji kale oo dagaalka weyn ee ka dhanka ah hanti-goosadnimada musiibada ee jasiiradda ay tahay in lagu loolamo oo lala dagaallamo.
Dayactirka goobta sixirka iyo ka faa'iideysiga ee iskuulka wuxuu bilaabmay Nofeembar. Muhiim u ah dayactirka dugsiga iyo dib u dhiska xarunta bulshada, jikada, iyo garoomada ciyaaraha waa mutadawiciin muddo dheer ah, oo hadda ah dadka deggan el barrio Mariana. Markii ugu horreysay ee aan ku imaado baaskiil, xulafadaas, iyo kuwii markii ugu horeysay la yimid, waxay si hagar la’aan ah u shaqeeyeen si ay uga caawiyaan dadka deegaanka dib u dhiska xarunta iyo waliba guryaha xiidmaha, qashinka nadiifka ah, ka caawinta waajibaadka jikada, iyo gacan ka geysashada dib u abuurista abuurka. Waxay hadda caawinayaan dadka deegaanka maadaama ay horumarinayaan keynta cuntada ee La Loma, waxayna gacan ka geysanayaan sameynta iskaashato daabacaadda shaashadda maxalliga ah oo ku taal meesha la dayactiray. Waa midnimada noocaan ah ee muddada fog ah ee aan dooneyno inaan sii wadno fududeynta musiibada kadib, iyo inta lagu gudajiro howlaha dheer ee dib u dhiska bulshada iyo nolosha.
Markuu soo noqday markii seddexaad, MADR #PRRebuilds Kooxda waarta iyo u adkeysiga deegaanka waxay ku biirtay dadka deegaanka iyo abaabulayaasha Proyecto de Apoyo Mutuo iyadoo kooxda BowPower ay ku hanuuniyeen dadka deegaanka tababar gacmeed ku rakibaya nidaamka 2 maalmood. Xubnaha bulshada iyo wada-hawlgalayaashu waxay sameeyeen hawsha inteeda badan intii ay ku jireen tababarka dhismaha mashiinka microgrid, kororka iyo rakibaadda sawir qaadista, fiilooyinka nidaamka, hawlgallada muddada dheer iyo dayactirka, iyo sidoo kale sida loo kala furfuro dibna loogu celiyo baalayaasha cadceedda si ammaan ah dib ugu noqoshada maraakiibta. weel ay saaran yihiin haddii duufaan kale dhacdo.
Midkoodna suurtagal ma noqon lahayn ama kuma dhici lahayn jadwalka hadaanay ahayn dadaalka wadajirka, midnimada, iyo go'aaminta: xulafada heeganka ah; shabakad ka jawaabeysa masiibo baahinta oo la isku halleyn karo; grit iyo midnimada shaqaalaha boricua: shaqaalaha dhismaha waddooyinka, shaqaalaha korantada; iyo bamberosyada cajiibka ah (dab-damiska) ee Puerto Rico. Isku soo wada duuboo, 24 saacadood oo keliya ilaa bilowga rakibaadda shabakadda, waxay ka adkaadeen gaadiid dib uga dhacay dekedda ilaa Mariana ee nidaamka qorraxda, wiish aan habboonayn oo loo baahan yahay in si ammaan ah oo aamin ah loogu wareejiyo weelka keydka min hal gaari mid kale loona wareejiyo maxkamadda kubbadda koleyga ee dugsiga meelaynta; la'aanta iyo deg deg dhisida wado wasakh ah si loogu socodsiiyo nidaamka barxada kubbadda koleyga, iyo ka saarida labo, gawaari culus oo waaweyn oo laga soo qaaday carrada carrada ah ee wadada cusub ee soo ifbaxay, iyo dhamaadka howsha 5ta saac, a meelaynta ugu dambaysa ee weelka kaydinta ee u jeedda koonfur-koonfur-galbeed iyada oo aan la hayn wax hadh cad ah. Waxaas oo dhami waxay sidoo kale suurtagal ahaayeen isku duubni ay muujiyeen folx joogto ah oo aan la tirin karin, iyada oo la siinayo waqtigooda, shaqadooda, aqoontooda, dhaqaalahooda, maaliyaddooda, iyo aragti guud oo ku aaddan adduun ka wanaagsan oo ku dhisan is caawinta iyo wadajirka, madaxbannaanida iyo isla xisaabtanka, joogtaynta iyo adkeysi.
Waxay ahayd guul aan la rumeysan karin oo la yaab leh iyo isu-imaatin maalin, kaas oo ku habboon si ku habboon tostonachos iyo cabitaan! In kasta oo, los bomberos wali ma uusan cabbin, xitaa ma dabaaldegin! Waxay si dhab ah ugu heellan yihiin shaqadooda iyo dhaqankooda. #BomberosdePuertoRicoSolidaridad
Waad dhagaysan kartaa Christine ee Proyecto de Apoyo Mutuo oo ka hadasha rakibaadda qorraxda, by gujinaya halkan (wareysiga Isbaanishka).
Ujeedada bulshada Mariana, ee mashaariicda el Centro de Imaginación, iyo dhaqdhaqaaqa gargaarka iskaashigu waa in la xoojiyo jaaliyadaha si ay u noqdaan kuwa iskood u madax bannaanaada.
Laga soo bilaabo madax-bannaanida cuntada illaa nidaamyada tamarta ee casriga ah iyo qaababka kale ee ku habboon, teknoolojiyadda waara iyo geedi-socodka, MADR naqshad waara iyo kooxaha shaqada injineernimada waxay raadiyaan inay horumariyaan naqshadaha la-qabsiga ah ee loogu talagalay xalalka khaaska ah inta lagu jiro jawaabta musiibada iyo dib-u-dhiska.
Ujeeddadaas ayaa ah in Gar-gaarka Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid uu u taagnaado midnimada bulshada el barrio Mariana, Proyecto de Apoyo Mutuo, iyo xulafada kale ee gargaarka iskaashiga wadaagga ah keentaa warshado microgrid qoraxda waara oo ay ku shaqeeyaan Puerto Rico.
Rakibida microgrids-ka cadceedda inta ugu badan ee ka dhexeeya xarumaha gargaarka wadaagga ah intii suurtagal ah, waxay awood u siineysaa ururinnadaas hagaajinta adkeysiga iyo is-adkeynta si ay uga jawaabaan inta lagu gudajiro dhacdooyinka duufaanta mustaqbalka waxayna siinayaan aag loogu talagalay hufnaanta tamarta iyo la-xisaabtanka, taasoo u oggolaaneysa faham wanaagsan oo shaqsi iyo wadareed isticmaalka iyo saamaynta, iyo nooc hage ah oo ku saabsan is-maamul wanaagsan.
MADR waxay hadda taageereysaa El Centro de Apoyo Mutuo ee Caguas sidii loo horumarin lahaa beel labaad oo leh milkiilaha qorraxda, iyada oo lala kaashanayo xulafada Huerto Feliz iyo Urbe Apie.
Iyada oo qayb ka ah Gargaarka Musiibada Caawinta Musiibada naqshadeynta joogtada ah iyo koox ka shaqeysa injineernimada, dhiirigelinta iyo taageeridda dib-u-dhiska bulshada lagu hago ee xoogga saaraya teknolojiyada habboon iyo nidaamyada baahiyaha muhiimka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha, sida biyaha iyo tamarta, waa lama huraan. Kooxaha gargaarka is-kaashatada iyo kooxaha shaqeeya waxay wadaagaan aqoonta iyo xirfadaha midnimada xubnaha bulshada, barashada iyo soo saarista xalal cusub iyo habab lagu xaliyo dhibaatada oo ay weheliyaan xubnaha bulshada
Adkaysigu wuxuu kuxiranyahay la qabsiga iyo ismaamulka. Puerto Rico waxay taagan tahay isgoyska gumeysiga, hanti-wadaaga musiibada iyo qalalaasaha cimilada. Hadda waa fursad muhiim ah oo lagu dhisi karo adduunka aan dooneyno inaan aragno oo aan isla degno. Puerto Rico waa waana goob dagaal - oo udhaxeysa dadka iyo macaashka; caafimaadka iyo faa'iidada; caddaaladda deegaanka iyo faa'iidada. Waa inaan iska caabinaa oo wada dhisnaa. Isku-filnaansho, adkeysi / y, is-gargaarid iyo wada-jir WAA ficillo iska caabin ah. Waxaan ku beddeli karnaa hay'adaha dulmiga iyo qaababka bulshada ee jira hay'ado iska soo horjeed ah oo iskood isu abaabulay. Looma baahna in la sugo in la abuuro ilaa "kacaankii ka dib".
Bulshada Mariana waxay horumarisay xalal, oo ay ku dheehan tahay shaqada iyo aragtida Proyecto de Apoyo Mutuo iyo dhaqdhaqaaqa Centros de Apoyo Mutuo jasiiradda oo dhan, waa tusaalaha la taaban karo ee aragtida aan wadajirka u hayno, waana midnimada midnimadayada.
Tani waxay rajaynaysaa inay noqoto bilowga sii joogteynta iyo madax-bannannada maareynta qorraxda ee qorraxda iyo qorraxda si loo xoojiyo dhaqdhaqaaqa gargaarka labada dhinac ee Puerto Rico oo dhan. Si loo taageero tan iyo kuwa kale oo la mid ah Mashaariicda Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid masiibo iyo barnaamijyada, halkan waad ku tabaruci kartaa.
All awooda u leh dadka,
- Gargaarka Gargaarka ee Musiibada
Fadlan la wadaag macluumaadkaan cid kasta oo ku sugan harada